သုတေသနထွက်ကုန်များရောင်းချခြင်း နှင့် သင်တန်း
(၅) ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်း အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဇီဝနည်းပညာအခန်းကဏ္ဍ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်သုတေသသန လုပ်ငန်းများ
(၁)မျိုးမြှင့်နွားများ၊ နွားနောက်များ ထိန်းသိမ်းေမွးမြူ၍ ေကျးလက်ေဒသသို့ ဖြန့်ဖြူးေရာင်းချခြင်း
(၂)ရာသီဥတုဒဏ် (ေရငတ်ခံ၊ ေရနစ်၊ ဆားဒဏ်) ခံနိုင်ရည်ရှိေသာ မနောသုခစပါးမျိုးအား ေဒသမရေွးစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ စမ်းသပ်၍၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ IAEA Projects များ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(၃)အထွန်းအဏုဇီဝပိုးများ အသုံးပြုထားသော “ေရွှဇီဝ”၊ “ရေွှသီးပွင့်”မေြသြဇာများ၊ “ေရွှစိမ်း”၊ “ေရွှဆည်ရည်”၊ “ေရွှပိုးနှင်” နှင့် စွမ်းအားပြည့်ေရွှစိမ်းထုတ်လုပ်ေရာင်းချခြင်း
(၄)တစ်သျှူးငှက်ေပျာပင်ငယ်များ၊ ပိန်းပန်းပင်ငယ်များ၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်များ ပွားများ၍ ေရာင်းချခြင်း၊ ရှားပါး မျိုးစိတ်များ တစ်သျှူးနည်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းပွားများခြင်း၊ ေဒါနရေွှဝါ ဆေးအဆီ၏ ငှက်ဖျားပိုးအပေါ် သက်ရောက်မှုလေ့လာခြင်း
(၅)Bacterial Food enzyme များကို ေလ့လာခြင်း၊ ေကျာက်ဆည်မြို့ ဒေသရှိ သောက်သုံးရေအား ဓါတ်ခွဲလေ့လာခြင်း
(၆)ဇီဝပိုးသတ်ေဆးထုတ်လုပ်ေရာင်းချခြင်း၊ Chitosan Nanoparticles စမ်းသပ်လေ့လာခြင်း
(၇)Cell Culture Lab တွင် Brain Cancer, Breast Cancer, Lung Cancer cell line များေမွးမြူပွားခြင်း၊ ေဆးဖက်ဝင်အပင်များ၏ ေဆးအဆီဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်း
(၈)Single Cell Protein ကို Yeast မှ ထုတ်ယူ၍ ေရသတ္တဝါအစာေတာင့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ၄င်းအစာ၏ သက်တမ်းနှင့် ေရသတ္တဝါတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်ကိုေလ့လာခြင်း၊ ဇီဝအီသနောကို လေ့လာခြင်း
(၉)ရှားပါးမျိုးစိတ်များ(တိရိစ္ဆာန်၊ အပင်)၏ ဗီဇကို ေမာ်လီကျူလာနည်းစဥ်ဖြင့် ေလ့လာခြင်း
(၁၀)Horticulture အနေဖြင့် သရက်ပင်များ ကိုင်ကူး/ကိုင်းဆက်ခြင်း၊ နှင်းဆီပင်များ နှင့် အခြားေသာ အလှပန်းပင်များ ပွားများသုေတသနပြုခြင်း
(၁၁)Cell Culture Lab နှင့် Microbiology Lab တို့အား(Biosafety Level-2) မှီအောင် စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Vibiro Cholera မှ ပရိုတင်း လေ့လာခြင်း
(၁၂)Environmental Lab. ထူထောင်ခြင်း၊ Bioreactor တည်ဆောက်ခြင်း
(၁၃)သွေးလွန်တုပ်ကွေးခြင်အား ရောင်ခြည်ပေး၍ ၄င်းတို့၏ သက်တမ်းဖြစ်စဥ်သိရှိ၍ မျုိးပွားပြီး ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ စေလွှတ်ခြင်း
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် သုတေသသန လုပ်ငန်းများ
(၂)ေဒသနှင့်လိုက်ေလျာညီေထွသော စပါးမျိုးအား ဆက်လက်သုေတသနပြု၍ မျိုးစပ်ခြင်းဖြင့် ေဒသမျိုးများ၏ စားသုံးမှုစွမ်းရည်နှင့် အထွက်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ခြင်း
(၃)“ေရွှဇီဝ”၊ “ေရွှသီးပွင့်”၊ “ေရွှစိမ်း”၊ “ေရွှဆည်ရည်”၊ “ေရွှပိုးနှင်” နှင့် ဇီဝပိုးသတ်ေဆးများ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးေရာင်းချခြင်း၊ Chitosan nanoparticles ၏ စွမ်းရည်ကိုလေ့လာစမ်းသပ်ခြင်း
(၄)တစ်သျှူးငှက်ေပျာ၊ ပိန်းပန်း၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်၊ ဂန္ဓမာပန်းပင်ငယ်များ ပွားများထုတ်လုပ် ေရာင်းချခြင်း၊ ဆေးသစ်ခွ၊ ရှားပါးအပင်မျိုးစိတ်နှင့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထိန်းသိမ်းခြင်း
(၅)Food enzyme များ၏ optimum condition (PH, temp) များ Crud enzyme (or) Powder form (or) Liquid form တို့မှ အကောင်းဆုံးပုံစံကို ေရွးချယ်ခြင်း၊ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခြင်း
(၆)စမ်းသပ်ထားသော ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအား စာအုပ်ထုတ်နိုင်အောင် စီမံခြင်း
(၇)Single Cell Ptotein အစာေတာင့်အား ရောင်းချမှုအဆင့် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ေရညှိမျိုးစိတ်များ လေ့လာခြင်း၊ ဇီဝအီသနောအား Lab scale ထုတ်လုပ်ခြင်း
(၈)သွေးလွန်တုပ်ကွေးခြင်ထီးအပေါ် ရောင်ခြည်သက်ရောက်မှုလေ့လာခြင်း၊ မျိုးမပွားနိုင်သည့် ခြင်ထီး အား ပတ်ဝန်းကျင်သုိ့ လွှတ်၍ အခြေအနေစောင့်ကြည့်ခြင်း
(၉)နိုင်ငံတကာမှ ဌာနအတွက်လိုအပ်သော Molecular Experts များ ပင့်ဖိတ်၍ သုေတသနများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြင်း
(၁၀)Biotechnology conference in Myanmar အနေဖြင့် (၂)နှစ် တစ်ကြိမ် (သို့) (၁)နှစ်တစ်ကြိမ် လက်ခံကျင်းပနိုင်ေအာင် စီမံေဆာင်ရွက်ခြင်း
(၁၁)Soil Laboratory ထူထောင်ခြင်း
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်သုတေသသနလုပ်ငန်းများ
(၁) တစ်သှျူးအပင်ငယ်များေရာင်းချခြင်းအပြင် မြန်မာပြည်ရှိ တစ်သျှူးဓါတ်ခွဲခန်းများထံသို့ မျိုးပုလင်း များ ေရာင်းချခြင်း၊ ေဆးဖက်ဝင်အပိုင်းများ (အရွက် ၊ ပင်စည်၊ အမြစ်) ကို သီးခြားပွားများ၍ ေရာင်းချခြင်း၊ ဥပမာ- Hairy Root Culture
(၂) ေရွးချယ်ထားေသာ Food enzyme ပုံစံ၏ သက်တမ်းကိုေလ့လာ၍ စက်ရုံများနှင့် ချိတ်ဆက် ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရေညှိမျိုးစိတ်၏ အသုံးဝင်ပုံကို လေ့လာခြင်း
(၃) ဇီဝအီသနောအား Cost effective ဖြစ်သောနည်းစဥ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မြန်မာ့ရှားပါးမှိုမျိုးစိတ်များ Tissue Culture နည်းစဥ်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ နိုင်ငံတကာနှင့် bilateral cooperation ရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ခြင်း၊ ေဆးဖက်ဝင် Cordecep spp. အား ေမွးမြူခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသွင်းကုန်အစားထိုး သုေတသနများပြုလုပ်ခြင်း
(၄) အဏုဇီဝပိုးများထိန်းသိမ်း၍ ATCC ကဲ့သို့ စွမ်းရည်ရှိ အဏုဇီဝပိုးများေရာင်းချခြင်း၊ Biosafety နှင့် Biosecurity Law များ ေပါ်ထွက်လာေစရန် အခြားေသာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ေဆာင်ရွက်ခြင်း
(၁)အင်းဆက်အထီးများကို ဓါတ်ရောင်ခြည်အသုံးပြုပြီး မျိုးမအောင်စေရန်ပြုလုပ်၍ အင်းဆက် ဖျက်ပိုးထိန်းချုပ်နှိမ်နင်းနိုင်သော နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသန
(၂)လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ နိုင်ငံခြားသို့ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် Good Agriculture Practice နှင့် ကိုက်ညီသော အင်းဆက်ဖျက်ပိုး နှိမ်နင်းနည်းများ
(၃)အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ခြင်း၊ စားသုံးမှုအရည်အသွေးမြင့်ခြင်း၊ ရာသီမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း၊ စိုက်ရက်တိုသောစပါးမျိုးသစ်များ စိုက်ပျိုးခြင်း
(၄)စားသုံးမှုအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ရာသီစပါးဖြစ်သော စပါး၊ ပေါ်ဆန်းဘေးကြား (ရွှေွှဘို) နှင့် ဖျာပုံပေါ်ဆန်းအား ရောင်ခြည်ပေး၍ သက်တမ်းစပါးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် သုတေသန
(၅)ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော အထူးသဖြင့် ရေငတ်ဒဏ်ခံစပါးမျိုး နှင့် ရေနစ်ဒဏ်ခံစပါးမျိုး ရရှိစေရန်အတွက် မနောသုခနှင့် ဧရာမင်းတို့အား Gamma ရောင်ခြည်ပေး၍ ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်နေသည့် သုတေသနလုပ်ငန်း
(၆)သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သောခြင်များ၏ ပေါက်ပွားမှုအား ထိန်းချုပ်ရာတွင် အင်းဆက်မြုံစေသောနည်းစဉ် Sterile Insect Technique (SIT) နည်းပညာအား စမ်းသပ် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်း
(၇)အရှေ့တောင်အာရှတွင်ကျရောက်သော သစ်သီးထိုးယင်နှိမ်နင်းမှု၌ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာပြီး အကျိုးရှိမည့် အင်းဆက်အမြုံနည်းစဉ်ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
(၈)စိုက်ပျိုးရန်အသုံးမပြုသော မြေများနှင့့်် ကြားသီးနှံစိုက်ပျိုးရန်အတွက် Gamma ရောင်ခြည် အသုံးပြုသော နှံစားပြောင်းမျိုးသစ်တစ်ခု သုတေသန
(၉)ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောစပါးမျိုးအား နျူကလီးယားစွမ်းအင်အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသန
(၁၀)ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဝါမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသန
ဆရာ/ဆရာမများအတွက် Basic Molecular Training ပေးခြင်း
ဆရာ/ဆရာမများအတွက် Microbiology, Plant Tissue Culture သင်တန်းပေးခြင်း
English Speaking Class ဖွင့်ပေးခြင်း
တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်းမှ Chinese Speaking Class ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း
သုတေသနဆောင်ရွက်သူများအတွက် “Essential Chemistry Training” သင်တန်းပေးခြင်း